Angovo nokleary: tombony lehibe sy fatiantoka | Green Renewable
Angovo nokleary: tombony sy fatiantoka
Portillo Alemanina | 27/08/2021 10:00 | Angovo nokleary
Ny firesahana ny angovo nokleary dia ny fieritreretana ireo voina Chernobyl sy Fukushima izay nitranga tamin'ny 1986 sy 2011. Izy io dia karazana angovo izay miteraka tahotra iray noho ny loza aterany. Ny karazana angovo rehetra (afa-tsy ny azo havaozina) dia miteraka fiatraikany ho an'ny tontolo iainana sy ny olombelona, ​​na dia misy aza manao izany bebe kokoa noho ny hafa. Amin'ity tranga ity, ny angovo nokleary dia tsy mamoaka entona mandritra ny famokarana azy, saingy tsy midika izany fa tsy misy fiatraikany amin'ny tontolo iainana sy ny olombelona amin'ny fomba ratsy. Misy maro tombony sy fatiantoka ny angovo nokleary ary ny olombelona dia mila manombana ny tsirairay amin'izy ireo.
Noho izany, amin'ity lahatsoratra ity isika dia hifantoka amin'ny fanazavana izay tombony sy fatiantoka entin'ny angovo nokleary ary ny fiantraikan'izany amin'ny mponina.
1 Inona ny angovo nokleary
2 Tombony sy fatiantoka ny angovo nokleary
3 Ny fiantraikan'ny angovo nokleary amin'ny tontolo iainana
Inona ny angovo nokleary
Ny zavatra voalohany amin'ny rehetra dia ny fahalalana hoe inona io karazana angovo io. Ny angovo nokleary dia angovo azontsika avy amin'ny fission (fizarana) na fusion (fitambarana) ataoma izay mandrafitra ilay fitaovana. Raha ny tena izy, Ny angovo nokleary ampiasaintsika dia azo avy amin'ny fihenan'ny atôma uranium. Fa tsy ny uranium ihany. Ny U-235 no be mpampiasa indrindra.
Mifanohitra amin'izany, ny masoandro miposaka isan'andro dia reacteur fusion nokleary lehibe izay afaka miteraka angovo be. Na madio sy azo antoka toy inona aza izy io, ny hery niokleary mety dia fusion mangatsiaka. Raha lazaina amin'ny teny hafa, dingana fusion, fa ny mari-pana dia manakaiky kokoa ny mari-pana amin'ny efitra noho ny maripanan'ny masoandro.
Na dia mianatra aza ny fusion, ny tena izy dia io tebitera nokleary io ihany no heverina ho teorika ary toa tsy manakaiky ny fanatontosana azy isika. Izany no mahatonga ny angovo nokleary henontsika sy noresahintsika teto mandrakariva fa ny fihanaky ny atôma uranium.
Tombony sy fatiantoka ny angovo nokleary
Na dia manana fifandraisana ratsy aza izy io, dia tsy tokony hotsarain'ny vaovao na ny sarimihetsika momba ny lozam-pifamoivoizana sy ny fako radioaktifa aza. Ny tena izy dia manana tombony maro ny hery niokleary. Ireto no zava-dehibe indrindra:
Ny angovo nokleary dia madio amin'ny dingam-pamokarany. Raha ny marina, ny ankamaroan'ny reactors nuklear dia mamoaka etona tsy mampidi-doza ao amin'ny atmosfera fotsiny. Tsy ny dioksidan'ny karbaona na ny metana, na ny entona na gazy mandoto hafa no mahatonga ny fiovan'ny toetrandro.
Ny vidin'ny famokarana herinaratra dia ambany.
Noho ny herin'ny angovo nokleary mahery vaika, angovo be dia be azo amboarina ao amin'ny orinasa iray.
Saika tsy mety ritra. Raha ny marina dia mino ny manam-pahaizana sasany fa tokony sokajintsika ho angovo azo havaozina izy io, satria ny tahiry uranium ankehitriny dia afaka manohy mamokatra angovo mitovy amin'ny ankehitriny mandritra ny an'arivony taona maro.
Tsy miova ny taranany. Tsy toy ny loharano angovo azo havaozina maro (toy ny angovo azo avy amin'ny masoandro izay tsy azo ateraka amin'ny alina na rivotra tsy azo ateraka raha tsy misy rivotra), goavana be ny famokarany ary maharitra mandritra ny andro an-jatony. Ho an'ny 90% amin'ny taona, tsy ankanavaka ny famenoana refilles sy ny fikatonan'ny fikolokoloana, miasa amin'ny heriny feno ny angovo nokleary.
Araka ny ampoizinao, ny angovo nokleary dia misy fatiantoka sasany ihany koa. Ireto no tena lehibe:
Mampidi-doza tokoa ny fako. Amin'ny ankapobeny, izy ireo dia ratsy amin'ny fahasalamana sy ny tontolo iainana. Maloto sy mahafaty ny fako radioaktifa. Mandany an'arivony taona ny fahasimbany, izay mahatonga ny fitantanana ho marefo tokoa. Raha ny marina dia olana mbola tsy voavahanay izany.
Mety ho tena lehibe ny lozam-pifamoivoizana. Ireo fitaovana famokarana angovo nokleary dia misy fepetra fiarovana tsara, saingy mety hisy ny lozam-pifamoivoizana, amin'ity tranga ity dia mety ho matotra be ny lozam-pifamoivoizana. Ny Island of the Three Miles any Etazonia, Fukushima any Japon na Chernobyl ao amin'ny Firaisana Sovietika teo aloha dia ohatra ny amin'ny zavatra mety hitranga.
Lasibatra mora tratrarina izy ireo. Na loza voajanahary izany na asa fampihorohoroana dia lasibatra ny orinasa mpamokatra herinaratra nokleary ary raha potehina na simba dia hiteraka fatiantoka lehibe.
Ny fiantraikan'ny angovo nokleary amin'ny tontolo iainana
Na dia priori aza dia toa angovo tsy mamoaka entona entona, tsy marina tanteraka izany. Raha ampitahaina amin'ny solika hafa dia misy famoahana saika tsy misy izy io, saingy mbola eo izy ireo. Ao amin'ny tobim-pamokarana hafanana, ny entona lehibe avoaka ao amin'ny atmosfera dia ny CO2. Etsy ankilany, ao amin'ny toby famokarana angovo nokleary dia ambany kokoa ny emissions. Ny CO2 dia avoaka mandritra ny fitrandrahana uranium sy ny fitaterana azy amin'ilay zavamaniry.
Rano be dia be no takiana mba hampangatsiatsiaka ireo akora ampiasaina mandritra ny fizotry ny fizika nokleary. Atao izany mba hisorohana ny mari-pana mampidi-doza tsy ho tratran'ny reaktera. Ny rano ampiasaina dia alaina amin'ny renirano na amin'ny ranomasina. Imbetsaka ianao no mahita biby an-dranomasina ao anaty rano izay maty tampoka rehefa mafana ny rano. Toy izany koa, miverina amin'ny tontolo iainana ny rano miaraka amin'ny mari-pana avo kokoa, ka maty ny zavamaniry sy ny biby.
Ny lozam-pifamoivoizana ao amin'ny foibe famokarana angovo nokleary dia tena tsy fahita firy, fa mampidi-doza tokoa. Mety hiteraka ny lozam-pifamoivoizana rehetra loza mahatsiravina lehibe, na amin'ny sehatra ekolojika na amin'ny olombelona. Ny olana amin'ireo lozam-pifamoivoizana ireo dia mitoetra amin'ny taratra manjelatra mankany amin'ny tontolo iainana. Ity taratra ity dia mahafaty na inona na inona zavamaniry, biby na olona izay miharihary. Ankoatr'izay, afaka mijanona amin'ny tontolo iainana mandritra ny am-polony taona maro izy (mbola tsy azo onenana i Chernobyl noho ny haavon'ny taratra).
Ankoatry ny lozam-pifamoivoizana nokleary azo atao, ny fako vokarina dia afaka mijanona mandritra ny an'arivony taona maro mandra-pahatongan'ny radioactive intsony. Mampidi-doza ny zavamaniry sy ny biby eto an-tany izany. Androany, ny fitsaboana izay ananana ireo fako ireo dia tokony hakatona any amin'ny fasana nokleary. Ireo fasana ireo dia mitazona ny fako voaisy tombo-kase sy mitoka-monina ary apetraka ao ambanin'ny tany na any amin'ny fanambanin'ny ranomasina mba tsy handoto azy io.
Ny olana amin'ity fitantanana ny fako ity dia vahaolana maharitra. Ity dia, ny vanim-potoana ijanonan'ny fako nokleary radioaktifa dia lava kokoa noho ny androm-piainan'ireo boaty izay nasiana tombo-kase.
Fitiavana ny zanak'olombelona
Taratra, tsy toy ny loto hafa, sady tsy maimbo no tsy mahita. Manimba ny fahasalamana izany ary azo tazomina am-polotaona maro. Raha fintinina, ny angovo nokleary dia mety hisy fiantraikany amin'ny olombelona amin'ireto fomba manaraka ireto:
Miteraka kilema ara-pirazanana izy io.
Mahatonga homamiadana, indrindra ny tiroid, satria mandray io iode io io fihary io na dia miteraka fivontosan'ny ati-doha sy homamiadan'ny taolana aza.
Olana amin'ny tsoka, izay mahatonga ny leokemia na tsy fahampian-dra.
Tsy fahombiazan'ny foetus.
Manalefaka ny hery fiarovan'ny vatana izy io, izay mampitombo ny fihanaky ny aretina.
Olana ara-tsaina, indrindra ny fanahiana amin'ny taratra.
Amin'ny fifangaroana avo na maharitra dia miteraka fahafatesana.
Miorina amin'izay rehetra hita, ny tanjona dia ny mahita fifandanjana eo amin'ny fampiasana angovo isan-karazany nefa mampitombo ny angovo azo havaozina sy mandroso ny tetezamita angovo. Manantena aho fa miaraka amin'ity fampahalalana ity ianao dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny tombony sy fatiantoka ny angovo nokleary.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Energie mahazatra » Angovo nokleary » Angovo nokleary: tombony sy fatiantoka
Inona no atao hoe plankton